Warbixinta hoose nala wadaaga oo kusaabsan Maalinta Xuska Xuquuqda Dhalinyarada Aduunka oo shalay kubeegnayd iyo kaqayb galkii OYSU Denmark.
Dec 13, 2012 (QOL) Isniintii ooy taariikhdu ahayd 10/12/2012, waxaa caasimada wadanka Denmark ee Copenhagen kadhacay xuska maalinta Xuquuqda Dhalinyarada Aduunka oo sanad walba manta oo kale laga xuso aduunka oo idil. Munaasabadan oo ahayd mid siwanaagsan loosoo agaasimay waxaa siwadajir ah iskaga kaashaday oo soo qabanqaabiyay ururka Midawga Dhalinyarada iyo Ardayda Ogadenya ee wadankan Denmarka (OYSU-DK) iyo ururo badan oo isugu jira kuwo caalami ah iyo kuwo Danish ah sida Danish Muslim Aid, European Network Against Racism iyo Youth for Human Rights. Kaqayb galeyaasha xuskan caalamiga ah ayaa wadooyinka waa wayn ee magaalada Copenhagen kusoo maray socod qaatay mudo dheer xilli uu baraf badan ka da,ay wadankan kaasoo hakad galiyay isku socodka gaadiidka meelo badan oo Denmark kamid ahna ay korontadii kamaqnayd.
Ururka OYSU oo hormuud u ahaa munaasabadan ayaa wacdaro kamuujiyay dhamaan barnaamijtii iyo hawlihii ajendaha munaasabadan lagu soo bandhigay. Waxaa meel kasta kamuuqday calanka Ogadenya sidoo kale waxaa si muuqata qayb libaax ooga qaatay hawl wadeenka OYSU oo run a,ahaantii maanta muujiyay bisayl iyo dadaal dheeraad ah iyagoo soo bandhigay baraamij aad uxiiso badan sida dhaanta iyo farshaxan kale oo kamid ah hidaha iyo dhaqanka ugaarka ah shacab waynaha Somalida Ogadenya.
Waxaa dad waynihii munaasabada kasoo qaybgalay oo aad utiro badnaa qiiro iyo tiiraanyo badan kureebay khudbad kooban ooy madashada munaasabada ka jeedisay Iimaan Sheekh Xasan oo kamid ah da’ayarta udhalatay Ogadenia ee ku barbaartay qurbaha laakiin uu saameeyay dhibaatada iyo xad gudubyada joogtada ah eey kujiraan caruurta da’deeda ah ee kudhaqan Ogadenya iyadoo si wanaagsan usoo bandhigtay xanuunka kahaya dhibka eey kujiraan caruurta Ogadenya.
Dhanka kale waxaa munaasabada kahadlay dad badan oo isugu jiray khubaro magac dheer kuleh guud ahaan hay,adaha udooda xuquuqda caruurta iyo kuwo caalami ah aadna looga yaqaano wadankan Denmark sida Sheekh Cabdiwaaxid oo ah madaxa hay,ada Danish Muslim aid. Sheekha ooy sigaar ah oola kulmeen xubno kamid ah hawl wadeenka jaaliyada Ogadenya ee Denmark ayaa hadalladiisii waxaa kamid ahaa * Waan lasocdaa xaalada Ogadenya sababtoo ah labo jeer yaan Ogadenya tagay indhahaygana kusoo arkay xaalada dhabta ah ee kajirta diyaarna waxaan unahay inaan idin kala shaqayno waxkasta oon awoodno*.
Guud ahaan ahaan kasoo qaybgaleyaashii munaasabadan waxay isku balansadeen sidii looga wada shaqayn lahaa kahortaga xadgudubyada kadhanka ah ee guud ahaan caruurta aduunka laguhayo gaar ahaan caruurta Ogadenya ee gumaysigu naafeeyay dhibaatooyinka joogta ahna uu kuhayo.
Faysal / Denmark